Magaca iyo Qabiilka ninkii isku qarxiyay Albaabka Madaxtooyada oo lasoo bandhigay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com-Al Shabaab ayaa soo bandhigtay magaca iyo qabiilka uu kasoo jeedo ninkii labaad ee waday gaadiidkii ay habeenkii jimcaha u adeegsadeen weeraradii ismiidaamina iyo midkii tooska ahaa ee ka dhacay agagaarka xarunta Madaxtooyada.
Maxamed C/raxmaan Cabdullaahi (Anas) ayaa ahaa ninkii waday gaarigii ku qarxay afaafka hore ee halka laga galo xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, gaarigan waxaa sidoo kale saarnaa ragii ka dagaalamay agagaarka Madaxtooyada.
Ninkan oo ku dhintay weerarka ayaa Al Shabaab waxa ay sheegeen in uu kasoo jeeday Beesha Raxan Weyn gaar ahaan jufada Boqol Hore, waxa uuna ninkan sanooyin badan xubin ka ahaa kooxda Al Shabaab.
Al Shabaab ayaa horey usoo bandhigay magaca ninkii isku qarxiyay agagaraka Hotelka Dorbin ee magaalada Muqdisho, waxa ayna Shabaab sheegeen in ninkaasi uu kasoo jeeday Beesha Mariixaan.
Weeraradii is qarxinta iyo midkii tooska ahaa ee Al Shabaab Muqdisho ka fuliyeen habeenkii Jimcaha waxaa ku dhintay dad ka badan 30-qof oo isugu jiray dad shacab ah iyo ciidamo katirsan dowlada.